Salaadda Saint Catherine ee Siena. ? Ilaalinta, Caddaaladda iyo Jacaylka.
Ducada Saint Catherine of Siena oo leh ujeedooyin kala duwan.
Waxaa loo yaqaanaa inay tahay mid ka mid ah dhakhaatiirta caqiidada katooliga, sidaa darteed waxay awood u leedahay inay naga caawiso arrimaha la xiriira caafimaadka iyo jirka, shucuurta iyo samaqabka wanaagsan.
Waxay ahayd qoraa iyo wacdiye ereyga Eebbe oo dhulka jooga had iyo goorna qalbigiisu deeqsinimo ka buuxaan jacaylka Eebbe inuu caawiyo kuwa baahan.
Sanadihii la soo dhaafay waxay noqotay mid ka mid ah quduusiinta in caqiidada katoolikka lagu ixtiraamo inbadan taasna waxaa ugu wacan awooddeeda weyn iyo mucjisooyinka la yaqaan.
1 Ducada Saint Catherine ee Siena Waa kuma Saint Catherine?
1.1 U soo duceeya Saint Catherine si loo ilaaliyo
1.2 U soo duceeya Saint Catherine caddaaladda
1.3 U soo duceeya Saint Catherine ee Alexandria jacayl
1.4 Si rajo la’aan ah nin
2 St. Catherine ee Siena awood ma leedahay?
Ducada Saint Catherine ee Siena Waa kuma Saint Catherine?
Wuxuu ku dhashay qoys ballaadhan, isagoo ah gabadha 23aad ee guurka.
Waxay ka tirsanayeen dabaqadda hoose ee bulshada oo aan u saamaxeynin inuu ku raaxeysto waxbarasho wanaagsan, hase yeeshe markii uu ahaa 7 wuxuu go'aansaday inuu naftiisa u hibeeyo dhiirrigelinta iyo inuu sameeyo heshiis is-dhawris oo uu fuliyay illaa ugu dambaysta cimrigiisa.
Waxay nooshahay ilaa da'da 33 waxayna ahayd Aabbi Pius II oo isagu ku dhawaaqay Santa de kaniisada katooliga Abriil 29, 1461.
Dhowrkii sano ee soosocda waxay noqotey qof ilaaliye u ah Talyaani, waxay heshay cinwaanka Dhakhtarka Kaniisada waxaana markii dambe loo magacaabay qayb ka mid ah Patron Saints of Europe.
Saint ayaa ka tagtay qoraal muhiim ah oo ilaa maanta loo arkaa mid ka mid ah shaqooyinka ugu muhiimsan ee kaniisadda katooliga.
U soo duceeya Saint Catherine si loo ilaaliyo
Gabadha bikradda ah oo qurux badan Catherine oo Siena sharrax wanaagsan leh!
Qalabka Ilaaha ugu sarreeya inuu sameeyo cajaa'ibyo badan, oo iftiin qurxoon oo kaniisad u leeyahay, wuxuu abuuray hibo hadiyado aan la aqbali karin, oo bikrado caqli iyo caqli badan leh geesinimadiisa iyo geesinimadiisa paladins.
Muuji ilaa iyo inta ay awooddaadu sii socoto, ku beeran Ilaah, adoo kasbanaya dhammaan himilada aan ugu hormarineyno wanaagga wacdinta, gaar ahaan is-hoosaysiinta, miyir-qabka, samir, dulqaad iyo dadaal badan ku dhaqanka gudashada waajibaadka gobolkeenna.
Ku mahadnaqa oo Rabbiga jeclaada, Saint Catherine wanaagsan ee farxadda leh ee aad heshay markii aad awood u leedahay inaad ku biirto Ilaah qoduusnimada iyo inaad ka heshay isaga nimcadiisa inaad ku farxi karto raalli ahaantaada mucjisooyinkaaga joogtada ah si kuwa aad ugu baahan ee codsadey, dhagayso baryada baryootankayga oo aad ii gaadho Wanaaggaaga rabbaaniga ah ayaa si deg deg ah kugu caawinaya nolosheyda dareenka leh, qoyskeyga, gurigeyga:
Ku soo qaado gacmahayga xoogga badan ee dhibaatadayda iyo quusashadayda oo u bandhig Rabbigeenna si dhaqso ah looga soo qayb galo.
Waxaan sidoo kale kaa baryayaa inaad i siiso ilaalin iyo dhawrsanaan, iyo in anigoo ku dayasho wanaaggaaga ku koraya aqoonta kaliya ee runta ah oo aan gaadho nasiib wanaagga la doortay.
Haddaad rabto badbaadin, kani waa ducada saxda ah ee loo aado Saint Catherine ee Siena.
Santa Catalina oo ah ilaaliyaha Talyaaniga iyo Yurub ayaa na siin kara taas ilaalinteena sidoo kale Meelkasta oo aduunka aad joogtidba.
Shar iyo tamar xun Waxay ku sugan yihiin deegaanka waxayna dadka ka dhigayaan inay buuxiyaan hawlahan foosha xun si ay u sameeyaan ml, taasina waa sababta salaadda loogu talagalay badbaadadu ay muhiimad weyn u leedahay waxaana lagula talinayaa in la sameeyo ugu yaraan maalin kasta.
Saacadaha subaxnimada iyo la kulanka qoyska waxay noqotaa dhaqan cibaado leh oo na ilaalin doona maalinta maalin kasta.
U soo duceeya Saint Catherine caddaaladda
Oh my Santa Catalina, maxay yihiin waxyaalaha aan macquul aheyn ee aad ku guuleysatay, waxaad tahay kan ugu macaan uguna jecel ee daryeel bixiyaheena, waxaan kaa codsanayaa caawimaad si aad u soo celiso dhammaan rajadayda ...
Waxaan codsanayaa caawimaadaada weyn in Eebbe udhaxeeyo qalbigayga iyo wiilkiisa, Ciise, iyo kuwa diyaar u ah inay i qalbi qaboojiso, waxaan kuugu yeerayaa kuwa diyaar u ah inaad gacmahaaga u furto si aad iigu dhiirrigeliso oo ii siiso nasiinno iyo xallin marka wax walba ay muuqdaan inay lumeen.
Saint Catherine, gabadh bikrad ah oo xoog badan jacaylna, maanta waan kacaa oo waxaan kaa doondoonaa badbaadadaada jannada, maxaa yeelay waxba kuma lihid la'aantiis iyo ta Eebbe.
Naagtayda macaan ee quruxda badan, iftiinka gaarka ah ee ku jira meelaha kore, u isticmaal si aan jidkayga u iftiimiyo.
Ii raaxee oo i caawi si aan u yareeyo xanuunka aan naftayda ku qaado.
Waxaan ka codsanayaa qalbigaaga weyn si aad u maqashid codsigeyga.
My Saint maamuus leh daahirsanaanta iyo barakeysan ee Saint Catherine ee awooda aan xad lahayn ee uu Ilaah ku siiyey, waxaan kaa codsanayaa inaad si is-hoosaysiinta ah ii siiso caawimaadaada iyo dhexdhexaadinta dhibaatadan, iyadoo rajadu tahay inaan ku dhejiyey gacmahaaga macaan iyo barakeysan: i caawi
(maxaad u baahan tahay si aad u hesho)
Waxaan kuugu mahadnaqayaa sida ugu badan ee aad dhageysatey codsigeyga, maxaa yeelay waxaan hubaa in baryadaydu adiga ku maqashay, iyo in kasta oo ay aad u adag tahay in la xaliyo, waxaan haystaa nabadgelyo hal mar gacmahaaga ku jira, runti waa la fulin doonaa, mar walba qofna kama niyad jabiyo weydiiso waxa aad jeceshahay, si kasta oo ay suurtagal u yihiin.
Samada Catherine ee barakeysan, adigu kuwa codsanaya wax aan macquul aheyn, inaad Ilaah u barideyso baahikeyga iyo murugada, waxaan kusoo laabtay rajadaydii ducadan, waxaan aamin sanahay badbaadadaada markasta ilaalinaysa.
Catalina gacaliyahaygu waa barakeynayaa noloshayda, ha joojin inaad iigu hagto siyaabo kaladuwan.
Waxaan kugu raacayaa iimaan weyn, is-hoosaysiin iyo dadaal.
Sidan ayay ahayd. Sidaas noqo. Sidaas noqo. Waxay noqon doontaa sidaas.
U soo ducee Saint Catherine ducadeeda cadaalada waqtiyada baahida.
Tan iyo markii ay ahayd cunug waxay la soo gudboonaatay dhibaatooyin ay ugu wacan tahay inay tahay dabaqadda hoose isla markaana ka tirsantahay qoys ballaaran.
Si dhow u ogow waxa ay tahay in laga gudbo dhibaatooyinka oo noqda caddaalad darrooyinka Ilaah hortiisa, taasina waa sababta ay xulufadeena u noqonaysa midka aan ku kalsoonaan karno si ay nooga caawiso kiisaska la xiriira sida saxda ah ee loo adeegsado cadaaladda dhulka ama tan ruuxiga ah.
U soo duceeya Saint Catherine ee Alexandria jacayl
Santa Catalina adiga yaa ka dhigi kara dad badan inay heshiiyaan ...
Wax yar ii samee, jacayl raadso, qalbigayga ka dhig mid sharaf iyo run ah, oo jacayl ka dhigaya, qalbigayga ayaa geli kara oo iga buuxin kara farxad.
Waxaan rabaa inaan awood u yeesho inaan ogaado jacaylka dhabta ah, dareenka dhabta ah, Santa Catalina, adiga oo awood badan kuleh ...
Ii oggolow nimcadaas, codsi ha kuu yimaado, si aan u helo ducaddaada, Saint Catherine way jeceshahay, jacayl kaamil ah oo aan been lahayn, kuwiinna akhlaaqda leh ee aad wax walba ka sarraysiisaan dunida dhan.
Ii tag oo fursad i siiya ducadanada, waxaan rabaa inaad salaadadayda mar labaad dirto.
Baryadayda ilaahay si uu noloshayda uga dhigo mid jacayl ka buuxo, oo nabad buuxda, waxaad ka dhigi kartaa mucjiso Santa Catalina ...
Waxaan kaa codsanayaa inaad isiiso jacayl, jacayl ka badan iyo jacayl dheeri ah, farxad, farxad fara badan, rajooyin wanaagsan, fikrado wanaagsan, ficillo wanaagsan, iga caawi sidii aan ugu guuleysan lahaa, jacaylka ayaa ii noqon doona sida tallaabo, waddo ...
Saint Catherine, adiga oo wax walba sameyn kara, wax i siiya oo leh dareenka dhabta ah ee jacaylka ii yimaado, aaminaada awoodaada iyo wanaaggaaga.
Waxaad ubaahantahay inaad ku bedelato magaca qofka aad jeceshahay ducada Saint Catherine ee Alexandria jacayl.
Waxaa loo yaqaanaa mas'uuliyaha haweenkaas iyagu waa bilaa jacayl, macallimiinta iyo ardayda.
Nolosha wuxuu ku qaatay xigmad weyn, geesinimo, xoog, xeelad iyo waxgarad. Waxay leedahay wax kasta oo loo baahan yahay si ay noogu fidiso kaalmada lagama maarmaanka ah ee arrimaha dareenka leh.
Waxay naga caawin kartaa inaan ka gudubno dariiqa loo maro qofkaas innaga loogu talagalay ama, haddii loo baahdo, waxay sidoo kale naga caawineysaa inaan ilaalinno wada noolaanshaha guryaha ay jacaylku halis ugu jiraan geeri.
Waxaan u dhaqaaqi doonnaa dhanka duco inaad nin ka quusato ee Santa Catalina de Siena.
Si rajo la’aan ah nin
My Holy Holy Catherine,
Adigu sidaad u qurux badnayd el sol, qurux badan sida la luna, oo qurux badan sida xiddigaha.
Markaad gashay gurigii Ibraahim, oo aad ku laysay 50.000 oo nin, oo aad u libaaxday sidii libaaxyo, oo waxay jilicsanayeen qalbiga (waxaad tidhaahdaa magaca qofka) aniga.
(Dheh qofka magaciisa) Isagu markuu i arko, wuu iga bixi doonaa jidkiisa, haddii uu hurdo ma hurdo doono, haddii uu wax cuno ma cuno.
Ma xasili doono haddii uusan u imaan inuu ila hadlo.
Wuu ii ooyi doonaa, aniga ayuu ii ooyi doonaa, sida ay Maryantii bikradda ahayd u ​​barooratay wiilkeedii barakeysanaa.
(Dheh qofka magaciisa saddex jeer, garabka bidix dhulka ku garaacaya),
Cagtayda bidix hoosteeda waxaan kugu haystaa saddex, afar eray, ama qalbigaaga.
Haddii ay tahay inaad seexato, ma hurdo doontid, haddii ay tahay inaad wax cuno, ma cunaysid, ma fadhin doontid ilaa iyo intaad ila soo bixin oo aan la hadlo oo aad ii sheegtid inaad i jeceshahay, oo waxaad i siisaa wanaaggaaga oo dhan.
Waxaad iga jeclaan doontaa dumarka adduunka oo dhan, oo waxaan had iyo goor kuu muuqan doonaa ubax qurux badan oo cusub.
Waxaad u maleyneysaa, ducadan in St. Catherine si rajo la'aan nin u tahay mucjiso!
Tani duco Maahan aalad loogu talagalay in lagu maareeyo dadka iyada oo aan la dooneynin, taa beddelkeeda waxay noqoneysaa ficil jacayl iyo caqiidooyin oo jannada ka barakeeya waxa aan badanaa ku qallajinno falalkeenna.
Ninkii guriga ka tagay, yaa go’aansaday ka tag guriga ama xiriir jacayl Wuxuu ku laaban karaa isagoo si aad ah u doonaya inuu haysto wixii uu ka tegey. Taasi waa sababta ugu weyn ee salaadda this gaar ah.
St. Catherine ee Siena awood ma leedahay?
Mar alla markii aad iimaan leedahay way awoodaa inay na caawiso xaalad kastoo aan uga baahan nahay.
Si kasta oo ay adagtahay ama aan macquul aheyn xaalada aan ku helno nafteena, waxaan had iyo jeer weydiin karnaa aaminaad aamin ah in mucjisada ay ka timid masayr dhaqso badan intii aan fileynay.
Had iyo jeer ka faa'iideyso Awoodda salaadda ee Saint Catherine ee Siena!
Salaad xoog iyo mucjiso ah Santa Barbara
Ducada adag ee Saint Helena